Koorsada cilmiga dhirta qaabdhismeedka - Geofumadas
Luulyo, 2021 Koorsooyinka AulaGEO
AulaGEO waa soo jeedin la dhisay sannadihii la soo dhaafay, oo bixisa koorsooyin tababar oo ballaaran oo la xiriira mowduucyo ay ka mid yihiin: Juqraafiga, Geomatics, Injineerinka, Dhismaha, Naqshadeynta iyo kuwa kale oo loogu talagalay aagga farshaxanka dijitaalka ah.
Sannadkan, waxaa la furayaa koorso aasaasi ah oo loo yaqaan 'Structural Geology' taasoo laga baran karo ilaha ugu waaweyn, xoogagga iyo xoogagga ku howlan sameynta qaab dhismeedka juqraafiyeed. Sidoo kale, dhammaan geeddi-socodka juqraafi ee gudaha iyo geeddi-socodka juqraafiyeed ee dibadda ee kicin kara halista cilmiga dhulka ayaa laga wada hadlay. Koorsadani waxaa loogu talagalay kuwa xiiseynaya cilmiga dhulka, iyo dhammaan kuwa u baahan inay helaan macluumaad sax ah oo kooban oo ku saabsan qaab dhismeedka ugu muhiimsan: sida Cilladaha, Wadajirka, ama Isku laaban.
QAYBTA 1: CILMADA DHISMAHA
QAYBTA 2: Cadaadiska iyo cilladaha
QAYBTA 3: Qaabdhismeedka Juquraafi
QAYBTA 4: Khataraha Jiolojiga
QAYBTA 5: Barnaamijka cilmiga cilmiga dhulka (Geology Software)
Looma baahna diyaargarow hore. In kasta oo ay tahay koorso aasaasi ah, waa mid dhammaystiran, fudud, macluumaadka waa la soosaaray oo ay ku jiraan dhammaan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah si loo fahmo geeddi-socodka cilladaha ee qolofka dhulka. Waxaan rajeyneynaa inaad ka faa'iideysan karto koorsadan. dhagsii Halkan si aad u daawato dhammaan waxyaabaha ku jira koorsada.
Post Previous" Hore INFRAWEEK 2021 - diiwaangelintu way furan tahay